Amaxesha aPhakathisiweyo-KuKhenketho · Oyoun | Ukucinga ngokutsha kweNkcubeko
Ukulandelela amabali kulo lonke elaseYurophu
Amaqabane: Oyoun (eJamani), KHALA uMthendeleko yaseBirmingham LGBT (UK), Dafa Puppet Theatre I-sro (iRiphabliki yaseCzech), Dlala Yenza Funda Khulisa (PPLG) (eGrisi)
Ziziphi iinkumbulo ezigcinwe yimizimba yethu? Imizimba yethu ingasixelela ntoni ngathi, kwixesha elidlulileyo, nangekamva? Ngokusebenzisa Amaxesha aPhakathisiweyo-Ukulanda iinkumbulo ezigcinwe yimizimba yethu, oyena msebenzi wobugcisa wale projekthi yePerform Europe, iingcali zenkcubeko ziphonononga ubuni, iinkumbulo ezizezomntu kunye neziqulathekileyo ngokusebenzisa idiasporic, decolonial and queer perspectives. I-Embodied Temporalities luphando, ugcino, umboniso kunye neprojekthi yokusebenza phantsi kolawulo lobugcisa lukaMadhumita Nandi.
Amaqabane asemva kwale projekthi aya kubonelela ngamathuba okuxhamla intsebenziswano, ukusuka kunyango oluhlangeneyo kunye nokuxhotyiswa ukuya ekwandiseni ukuqonda kweenyaniso ezihlanganayo ezihlala kwi-diaspora. Inkqubo yokukhenketha yale projekthi iya kusekelwa kunxibelelwano noluntu ngokuhlala, iincoko kunye nemidlalo yasekhaya kuMnyhadala we-SHOUT e-UK. KwiRiphabhliki yaseCzech, iziko lenkcubeko iDafa Puppet Theatre liya kubonelela ngolamlo olukhathalayo, olungakhathaliyo lwenkcubeko kunye nobugcisa kunye noluntu lwasekuhlaleni, kwaye luya kubamba imiboniso ephilayo, umboniso kunye neencoko zasekhaya kwi-Liv'in Festival 2022. PPLG - Performing Across Borders, IGrisi, iya kulawula utshintshiselwano phakathi kwabadlali kunye neembacu ekuxhobiseni iindibano zocweyo zamagcisa kunye nemidlalo ngokuququzelela ulwazi ngomothuko.
Ngaphantsi kolawulo lwezobugcisa lukaMadhumita Nandi, i-Embodied Temporalities ibandakanya iiprojekthi ezimbini zokukhenketha ngaba magcisa alandelayo:
U-Ahmad BaBa ubeka umhlaba wokuphanda ngezazisi kwinqanaba lemizimba.
Iindawo zokuhlala, ukuhlolwa, iindibano zocweyo, iingxoxo kunye nemidlalo iya kudibanisa iindlela ezimbini u-Ahmad abandakanyeka kuzo: ubugcisa bokwenza kunye nonyango lomdaniso.
Kulo mboniso u-Ahmad uphanda indlela ingcinezelo yenkqubo efakwe ngayo kumava aphilayo oluntu olujongelwe phantsi ngokungagqibekanga. Indlela imizimba ebamba ngayo iingcamango zezazisi ezonakeleyo, iintloni, kunye namabali aphazamisekileyo athi abe yibhayografi abaqala ukukholelwa kuyo malunga nobukho babo kweli hlabathi. Ukufikelela njani kwinguqu yonyango xa iinkqubo zengcinezelo zisaveliswa kwakhona, nangaphakathi kwezibonelelo zempilo yengqondo, uninzi lwezazisi ezingakhathalelwanga azikwazi ukufikelela kuzo? Le ndawo yokuhlala yindawo yokutshintshiselana ngale mibuzo, ibeka embindini ubugwenxa obukhulu bamava akhe aqulethweyo kunye neempawu zepolylithic ezichatshazelwa zizakhiwo zamandla kunye neengxelo zobukoloniyali. Ukuya kumjikelo wolwazi oluguqukileyo, inkqubo ayinakuba yeyomntu ngamnye, kuphela, njengeentlobo ezininzi zeendlela ezisetyenzisiweyo zasentshona ezichaphazela ukuziphatha okungezona i-hedonic, kodwa endaweni yoko yindlela yobudlelwane bobudlelwane obuqonda ngokufanelekileyo umsebenzi osekwe kuluntu njengesenzo sokuziphatha. utshintsho ngokwalo.
Iprojekthi yakhe iya kubandakanya ukuhlolwa, iingxoxo zephaneli, iindibano zocweyo zonyango lomdaniso obalulekileyo, kunye nofakelo olusebenzayo olugcinwe ngumculi.
UGugulethu 'Dumama' Duma
UDumama, ozelwe nguGugulethu Duma, ligcisa laseMzantsi Afrika elidlalayo lexesha elizayo, umbhali weengoma kunye nomphandi wenkcubeko. Ekhuthazwe yimiba emalunga nokungalingani kunye nokufuduswa, uxhalabile ngeeprojekthi eziphonononga ukulondolozwa kwenkcubeko, ubukho kunye neengcinga ngekamva. Izinto anomdla kuzo zidibana njengophando olusekwe kwintsebenzo, kunye nemibutho eyahlukeneyo, imibutho esebenzisanayo yomsebenzi egxile kwiingcamango zezopolitiko.
Ukucinga kwakhona ngomculo wesintu wezinyanya, abaphilayo nabangasekhoyo, uDumama usebenza ngelizwi, amarhintyela aphilayo, izixhobo zesaphetha ezenziwe ngesandla, iiglitches kunye nokugqwetheka. Ethabathekile ngamandla esandi, ukuvela kwethoni kunye nokubola kwizandi ezithile kunye neemvakalelo ezivuselelwayo phakathi kwala maza, uDumama ngomdla uphonononga isandi njengesixhobo senguqu yentlalo kunye nokuphilisa.
KHALA uMthendeleko [ikwangumxube/ngokwedijithali] eBirmingham, e-UK
Imibhalo-ngqangi Yamaqumrhu Angaphandle – Uvavanyo kunye neNgxoxo
Hlala kwiZiko lobuGcisa eMidlands: Apha // ukubhaliswa kwetikiti: Apha
NgoLwesibini 22 - Wed 23 Feb
Ukulungisa i-Aesthetics ye-Embodiment - Iworkshop
Ukuvela – Uvavanyo kunye neNgxoxo
Ilk عِلْق – uMboniso oSebenzayo/ uFakelo
Phila kwiiProjekthi ezicacileyo // Ukubhaliswa kwamatikiti: Apha
LIV'in Festival / I-Pod Třešní [kwakhona ngokwedijithali] eKladno nasePrague, kwiRiphabhliki yaseCzech
Ukwenza ngapha kweMida (PPLG) eLesvos, eGrisi
iplanethi yomthendeleko [umxube] Ubume obuyinyani obuyinyani, iveliswe eSweden
UDumama, owazalwa njengoGugulethu Duma, ngumzobi waseMzantsi Afrika wexesha elizayo, umbhali wengoma nomphandi ngezenkcubeko. Ukhuthazwe zizihloko ezinxulumene nokungalingani kunye nokufuduswa, ubandakanyeka kwiiprojekthi ezivavanya ulondolozo lwenkcubeko, ubukho kunye nokubonakalisa kwikamva.
Le ntsebenziswano yamazwe ngamazwe yenziwe ngaba PerformEurope. I-Perform Europe yiprojekthi exhaswa ngezimali yi-EU ejolise ekucingeni kwakhona ukuba imisebenzi yobugcisa eyenziwayo ibonakaliswa njani kwimida ngendlela ebandakanyayo, ezinzileyo nelungeleleneyo ngokuvavanya iindlela ezintsha zokukhenketha nokusasaza kunye nokubonelela ngeengcebiso zomgaqo-nkqubo weskimu senkxaso ye-EU yexesha elizayo. Olu hambo lweenyanga ze-18 lubandakanya isigaba sophando, ukuqaliswa kweqonga ledijithali, uvavanyo lweskimu senkxaso, kunye nokuyila iingcebiso zomgaqo-nkqubo.
I-Perform Europe ixhaswa ngemali yiNkqubo ye-Creative Europe ye-European Union kwaye ilawulwa ngokubambisana yi-Consortium yemibutho ye-5: IETM – Uthungelwano lwamazwe ngamazwe kubugcisa obudlalwayo bale mihla, Umbutho weMinyhadala yaseYurophu (EFA), Circostrada, I-EDN – iNethiwekhi yomdaniso yaseYurophu, yaye IDEA Consult.